Amaano Qurux Badan - Talooyin Ku Saabsan Ragga Casriga Ah | Ragga Stylish
Alicia tomero | | dhaqanka
Kaas oo aan dareemin daruurtaas baaxadda weyn ee farxadda, rabitaanka ah inuu la joogo qof kale oo uu dhex galo jacaylkaas, loo yaqaan jacaylka. Marka ololku qulqulayo rabitaanku waa mid aan la xakamayn karin iyo siyaabo iyo qaabab ayaa loo raadsadaa si looga farxiyo qofkaas. Waa markaad raadiso xiisaha sare ee qorista bogaadin wanaagsan.
Dareenkeenu waa ciyaarta ugu fiican ee ugu fiican Wax walba oo aan jecel nahay ha qulqulo, uguyaraan waa waxa lagu muujiyo bogaadinti qurxoon. U dir qofkaas aan aad u jecel nahay waxaan ka buuxin doonnaa dareenno iyo bogaadin Waa sida ugu fiican ee looga dhoola cadeeyo.
1 Amaano qurux badan
2 Amaan jacayl
3 Amaan gaaban iyo mid qosol leh
Qor weedho qurux badan oo aad ku amaano qofka aad jeceshahay waxay noqon kartaa qaab amaan. Waxaa jira bogaadin loogu talagalay dhammaan dhadhanka, oo leh qaabab iyo midabyo kala duwan, waa taas sababta ay tahay inaad u yeelatid garo sida loo waafajiyo midka saxda ah tarjumaan waqtiga saxda ah iyo goobta.
Ogaanshaha sida loo isticmaalo amaan wanaagsan waxay na siinaysaa xaaladda la xiriirida dadka kale, waa farsamadii hore iyo Waa dadaalka ugu fiican ee lagu bilaabi karo saaxiibtinimo qurux ama xiriir. Isticmaalkeeda kaama tagi doonto danayn haddii aad adigu abuurato ammaantaas, waxay kaaga tagi doontaa xusuusta ugu wanaagsan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ogaato, haddii haweenku leeyihiin qaab kale oo ay ragga ku eegaan, halkan ka akhriso maqaalkeena kale.
Waa hab shucuur leh oo lagu muujiyo jacaylkaaga, maaddaama guud ahaan noocyada noocan ahi aanay ahayn wax sasabanaya. wuxuu inaga dhigayaa inaan shubo xamaasadeena oo dhan. Jacaylka aan u dareemayno qofkaas waxaa lagu muujiyaa weedho noocan ah oo sasabasho ah. Waxaad ugu sheegi kartaa shaqsi ahaan ama waxaad isticmaali kartaa shabakadaha bulshada, Hagaag, inbadan oo kamid ah xitaa waxay la imaadaan sawiro wata jumlado jacayl ah oo lagu daray si ay uga dhigaan wax badan asal ahaan.
Waxaan kuu kala saari karnaa ugu faahfaahsan, ka caadifad iyo xitaa xamaasad, in kastoo ay runti weli jiraan xitaa kuwa ugu farmaajo badan, Laakiin ha quusan, wali waxaa jira dad wali jecel. Halkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa bogaadin jacayl:
Aniga oo adiga kaa riyoonaya ayaa waxyi i soo gaadhay, haddaba waxaan kaa rabaa in aad god igaga dhigtid qalbigaaga.
Waxa aan adiga kuu dareemayo aad ayey u weyn yihiin, si aan u badbaadiyo, waxaan u baahan lahaa adduun kale.
Ubaxyada oo dhan, kan ugu quruxda badan waa ubax iyo dumarka oo dhan, adiga ayaa ugu qurux badan.
Haddii indhahaagu ay xabsi yihiin oo aan xabsi daa'in ahay, sidee baan sidoo kale u jeclaan lahaa inaan maxbuus u noqdo.
Waxaad u baahan tahay inaad meel fog iga raadiso marka xigta ee aan kulmi doonno, maxaa yeelay waxaan ku jiraa daruuraha.
Ha tagin hada oo aan murugoonayo, adiguna waxaad ifisay maalintayda.
Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo ilmadaada ... inaan ku dhasho indhahaaga, dhex maro dhabankaaga, oo aan bushimahaaga u dhinto ».
Waxaan kaa jeclahay hooyaday, waxaanan dareemayaa inaan dambaabayo, maxaa yeelay iyadaa isiisay nolosha adna waad iga qaadanaysaa.
Waa inaad ii iibsato qaamuus. Sababtoo ah tan iyo markii aan ku arkay, waxaan ahaa carrab la '.
Waxaad iweydiisay maxaan kuu jeclahay oo aanan kaaga jawaabi karin. Maanta waxaan fahansanahay in jaceylka dhabta ah aan la soo koobi karin, waa la dareemi karaa oo kaliya.
Aad baan kuu jeclahay, wax walbana waan kula doonayaa. Taasi waa sababta aan u waasho marka aadan ila jirin.
Amaan gaaban iyo mid qosol leh
Iyagu waa intaas waxay awoodaan inay had iyo jeer helaan dhoola cadeyn, waana kaftanku had iyo jeer waa mid xamaasad leh oo wixii ka sarreeya ayaa jacayl ku dhaca. Tijaabi in jacaylkaaga ku muuji taabasho farxad leh, Waxaan kuu xaqiijinayaa inay tahay sida ugu wanaagsan ee qof looga adkaan karo.
Qosolku wuxuu soo saaraa dareen fayo qab iyo farxad, Markaa haddii aad adeegsato ammaan noocaan ah haddii ujeeddadaadu tahay inaad shukaansato, waxaad arki doontaa sida ay u bixiso natiijooyin aad u wanaagsan. Waxaan ka heli karnaa bogaadin isbarbardhigyo qosol leh iyo qawaaniin farshaxanno badan leh, laakiin dhammaantood waa kuwo ku macaaney jacayl.
Amaano gaagaaban ayaa sidoo kale leh olol u gaar ah. Way kooban yihiin laakiin waxaa loo qoray gunaanad aad u toos ah oo ah in ereyo kooban lagu dhaho wax sidaas ah gaari karaa qalbiga qofka kale. Halkan waxaan ku tusaynaa qaar ka mid ah kuwa wanaagsan ee bogaadinta ah:
Hadaad tahay qofkaan qurxoon markaad toosto, waxaan rabaa inaan kula seexdo habeen walbo.
Cirka dhexdiisa xiddiguhu way iftiimayaan, oo halkan Dhulka waxaa ku yaal Haweenka Quruxda badan.
Indhahaagu waa subaxdayda, afkaaguna waa habeenkayga, jidhkaaguna waa noloshayda oo dhan.
Miyaan wax kuu baraa ama ku shaqeeyaa?
Toos waan kaa fikiraa, hurdo waan kaa riyoodaa, maskaxdana ku soo duulay
Ma rumaysan doontid, laakiin soddon ilbiriqsi ka hor waxaan ahaa fag!
Sida Tarzan jeclaan lahaa inay noqoto, inuu ka baxo laan ilaa laan, ilaa uu sariirtaada ka gaaro.
Gabar, waa inaad jirkaaga u tilmaantaa sababta oo ah gooladahaas maalin kasta qof ayaa la dilaa.
Waxaa barakaysan kuwa sakhraanka ah, waayo, laba jeer bay ku arki doonaan.
Adiga ahaan, waxaan samada ugu kici lahaa baaskiil anigoo aadaya bireeg la'aan ».
Kumaan kun abwaan kun sano ayuu sharxi lahaa quruxdaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Amaano qurux badan